DHAGEYSO: Qof Guuleystay Oo Helay 450 Milyan Dollar Oo La Raadinayo & Sababta Ka Dambeysa | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
DHAGEYSO: Qof Guuleystay Oo Helay 450 Milyan Dollar Oo La Raadinayo & Sababta Ka Dambeysa
Shirkadda lottery-ga ee bakhtiyaa-nasiibka “Mega Millions” ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay iney raadinayso qof sanadkan ku guuleystay abaalmarinta, iyadoo tirada numberka ku guuleystay abaalmarinta tigidkiisa lagu iibiyay magaalada Florida.
Qofka lottery-ga ku guuleystay ayaa helaya lacago gaaraya 450 milyan oo dollar, waana qiimihii 4aad ee ugu badnaa abaalmarinta ee dhanka taariikhda.
Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in tirada number-ka abaalmarinta ku guuleystay sanadkan uu yahay 28, 30, 39, 59, 70, oo number 10 uu la socodo, mas’uuliyiinta lottery-ga ayaan illaa iyo hadda ogeyn qofka ku guuleystay sanadkan cidda uu yahay.
Qiimaha bakhtiyaa-nasiibkan ayaa ah 281 maliyan oo dollar marka uu qofku damco inuu lacagta si kaash ah uu mar kaliya ku qaato, halka marka uu damco in lacagta oo dhamaystiran uu qaato lacagta loo yaryareynayo.
Tigidka bakhtiyaa nasiibka Mega Millions ayaa lagu iibiyaa 44 gobol oo ay ku jirto Washington iyadoo qiimaha tigidkii uu yahay $2(labo dollar) oo qura.